DHAGEYSO: Xukuumadda Soomaaliya oo wado Qorshe dalka looga saarayo AMISOM ciidamada xoogana loogu wareejinayo | Marqaan News Agency
DHAGEYSO: Xukuumadda Soomaaliya oo wado Qorshe dalka looga saarayo AMISOM ciidamada xoogana loogu wareejinayo
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaashaandhiga C/llaahi Colaad Rooble oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay iney wadaan qorshe lagu tayeynayo Ciidamada Xooga dalka Soomaaliya si ay amaanka guud ee dalka ugala wareegaan Ciidamada AMISOM.
Mr Colaad oo hada Baydhabo ku sugan ayaa sheegay in ujeedka safarkiisa Baydhabo ay tahay sidii xog uga soo heli lahaa Ciidamada Xooga dalka Soomaaliya gaar ahaan qeybtooda 60-aad,islamarkaana loo muujin lahaa taageerada ku haboon ay u baahan yihiin si ay u sii laba jibaaraan dagaalka ka dhan ah Al-Shabaab.
Sidoo kale,Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya C/llaahi Colaad Rooble ayaa carabka ku adkeeyay iney gaari doonaan Gobolada kale ay ku sugan yihiin Ciidamada Xooga si loogu dhiira geliyo iney amaanka dalka kala wareegaan AMISOM.
Ciidamada AMISOM oo ka kala socda wadamo badan oo Africa ka tirsan ayaa taageero Malitari iyo mid farsamo siiya Ciidamada Xooga dalka Soomaaliya.
Amisom laga maarmi mayo inta ay joogaan Mooryaan Barlamaan lagu sheego oo dadka isku dira wadankana Dib u dhac ku Rida.